Al Shabaab oo sheegtay in ay qabsatay Deegaanno katirsan Gobolka Sanaag | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Al Shabaab oo sheegtay in ay qabsatay Deegaanno katirsan Gobolka Sanaag
Al Shabaab oo sheegtay in ay qabsatay Deegaanno katirsan Gobolka Sanaag
Al Shabaab ayaa sheegatay in ay la wareegtay 4-deegaan oo dhaca duleedka Degmada Laasqoray ee Gobolka Sanaag & waddooyin muhiim u ah isu socodka Degmooyin kala duwan, sida ay daabacday Warbaahinta Shabaab.
Magacyada deegaannada afarta ah ee Al-Shabaab sheegatay in ay gacanta ku dhigtay ayaa kala ah: Mirici, Masha-caleed, Xabaasha Aw-Cali & Markeet oo dhaca duleedyada degmada Laasqoray ee Gobolka Sanaag.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay la kulantay Waxgaradka Deegaannadaas, balse sooma bandhigin waxyaabaha ay kala hadashay Odoyaasha, sawirro ama muuqaal la xiriira kulankaas halka uu sida gaarka ah uga dhacay.
Dhanka kale waxa ay sheegtay Al-Shabaab in ay howlgalo qorsheysan ay ka fulisay halka loo yaqaan Gurya-Samo oo u dhaxeeya Degmooyinka Badhan iyo Laas-Qoray oo katirsan Gobolka Sanaag.
Puntland & Somaliland oo marar kala duwan ku dagaalamay deegaanno dhaca Gobolka Sanaag kama aysan hadlin sheegashada Al-Shabaab ee ah in ay gacanta ku dhigtay afar deegaan oo ay isku heystaan labadaan maamul.
DG Puntland ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay ka xireen marino kala duwan oo ay u adeegsanayeen isu socodka dhulka buuraha ah ee deegaannada maamulkaas si ay ugu xoogeysato deegaanno horleh.